एपीएफ टोलीद्वारा चौपाया बरामद सुनसरी, सुनसरी जिल्लाको कोशी गाँउपालिका ८ तिकुनेस्थित पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट भाद्र २७ गते एपीएफ टोलीले करीब दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको चौपाया बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट हरिपुरबाट खटिएको एपीएफ टोलीले उल्लेखित मूल्य बराबरको १३ वटा खसी बरामद गरेको हो । काँकडभिट्टाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा. ५ ख १४११ नम्बरको यात्रुबाहक बसको डिक्की भित्र राखेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त चौपाया बरामद गरिएको हो । एपीएफ टोलीले बरामद चौपाया आवश्यक कारवाहीको लागि स्थानीय भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।
सुनसरी, सुनसरी जिल्लाको कोशी गाँउपालिका ८ तिकुनेस्थित पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट भाद्र २७ गते एपीएफ टोलीले करीब दुई लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको चौपाया बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट हरिपुरबाट खटिएको एपीएफ टोलीले उल्लेखित मूल्य बराबरको १३ वटा खसी बरामद गरेको हो । काँकडभिट्टाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा. ५ ख १४११ नम्बरको यात्रुबाहक बसको डिक्की भित्र राखेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त चौपाया बरामद गरिएको हो । एपीएफ टोलीले बरामद चौपाया आवश्यक कारवाहीको लागि स्थानीय भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।